ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း Audi Murphy
သမိုင်း & ယဉ်ကျေးမှု Key ကိုကိန်းဂဏန်းများ
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: ပထမဦးစွာဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး Audi Murphy
by ကနေဒီ Hickman
တကျိပ်နှစ်ပါးသောသားသမီးများ၏ဆဋ္ဌမ, Audi Murphy က Kingston, TX အတွက်ဇွန်လ 20, 1925 (1924 မှချိန်ညှိ) မွေးဖွားခဲ့သည်။ အဆိုပါသားဆင်းရဲသားကို sharecroppers Emmett နှင့် Josie Murphy, Audi ဒေသရှိလယ်ယာမြေပေါ်မှာကြီးပြင်းခြင်းနှင့် Celeste အတွက်ကျောင်းကိုတက်ရောက်ခဲ့သည်။ သူ့ဖခင်ကမိသားစုစွန့်ပစ်သည့်အခါသူ၏အပညာရေး 1936 ခုနှစ်တွင်တိုတိုဖြတ်ခဲ့သည်။ တစ်ခုသာပဉ္စမတန်းပညာရေးနှင့်အတူ Left, Murphy ကသူ့မိသားစုကိုထောက်ပံ့ကူညီရန်အတွက်အလုပ်သမားအဖြစ်ဒေသခံလယ်ယာမြေပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်စတင်ခဲ့သည်။
တစ်ဦးကပါရမီရှင်မုဆိုး, သူကျွမ်းကျင်မှုကသူ့မောင်နှမအစာကျွေးမှုအတွက်လိုအပ်သောခဲ့ကြောင်းခံစားရတယ်။ မာဖီရဲ့အခွအေနေသူ့အမိ၏အသေခံခြင်းနှင့်အတူမေလ 23, 1941 ရက်တွင်ပိုဆိုးလာတယျ။
သူကအမျိုးမျိုးသောအလုပ်အကိုင်များအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်မိမိအပေါ်မိသားစုကိုထောက်ပံ့ဖို့ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း, မာဖီနောက်ဆုံးမှာတစ်ဦးမိဘမဲ့ဂေဟာ၌မိမိသုံးအငယ်ဆုံးမောင်နှမနေရာအတင်းအကျပ်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကသူ၏အဟောင်းတွေ, လက်ထပ်အစ်မ Corrine ၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်အတူပြုလေ၏။ Long ကစစ်တပ်ဆင်းရဲမွဲတေမှုမှလွတ်မြောက်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်းကြောင်းယုံကြည်သူသည်ဂျပန်အောက်ပါဆီအကူအညီတောင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ ပုလဲဆိပ်ကမ်းအပေါ်တိုက်ခိုက် ဒီဇင်ဘာလသော။ သူကသာတဆယ်ခြောက်နှစ်အဟောင်းဖြစ်သကဲ့သို့, Murphy ကအသက်မပြည့်သေးဖြစ်ခြင်းများအတွက်ရှာဖွေစုဆောင်းနေဖြင့်ပယ်ချခံခဲ့ရသည်။ ဇွန်လ 1942 ခုနှစ်တွင်မကြာမီကသူ၏ဆယ်ခုနစ်မွေးနေ့ပြီးနောက်, Corrine ကသူတဆယ်ရှစ်ခဲ့ကြောင်းပေါ်လာအောင်မာဖီရဲ့မွေးစာရင်းညှိ။
အမေရိကန်မရိန်းနှင့်အမေရိကန်ကြည်းတပ်ဝေဟင်ချဉ်းကပ်, Murphy ကြောင့်မိမိအသေးငယ်တဲ့အရပ်မှပယ်ချခံခဲ့ရပါတယ် (5'5 "110 ပေါင်။ ) ။ သူကအလားတူအမေရိကန်ရေတပ်သဖြင့်ပယ်ချခံခဲ့ရသည်။
အပေါ်ကိုနှိပ်သူနောက်ဆုံးမှာအမေရိကန်ကြည်းတပ်နှင့်အတူအောင်မြင်မှုရရှိနှင့်စခန်း Wolters, တက္ကဆပ်ဖို့အမိန့်ဇွန်လ 30. ပေါ်ဂရင်းဗိုင်း, တက္ကဆပ်မှာပါဝင်ရောက်ခဲ့သည်, Murphy ကအခြေခံလေ့ကျင့်ရေးစတင်ခဲ့သည်။ သင်တန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွင်းမှာတော့သူကျောင်းကချက်ပြုတ်ဖို့သူ့ကိုလွှဲပြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ဦးဆောင်သည်မိမိတပ်ခွဲမှူးထွက်လွန်။ ဒီတွန်းလှန်ခြင်း, Murphy ကအခြေခံလေ့ကျင့်ရေးပြီးစီးခဲ့နှင့်ခြေလျင်လေ့ကျင့်ရေးအတှကျဝိန်း Fort Mead, MD လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။
သင်တန်းပြီးသွား, မာဖီ Casablanca, မော်ရိုကိုအတွက် 3rd တပ်စုတစ်စု, Baker ကုမ္ပဏီ, 1st တပ်ရင်း, 15 ခြေလျင်တပ်ရင်း, 3rd ခြေလျင်တပ်မမှတစ်ဦးတာဝန်ကျတဲ့နေရာရရှိခဲ့သည်။ အစောပိုင်း 1943 ခုနှစ်တွင်ရောက်ရှိလာသူသည်များအတွက်လေ့ကျင့်စတင်ခဲ့ပြီး စစ္စလီကျွန်းများ၏ကျူးကျော် ။ ဇူလိုင်လ 10, 1943 ရက်တွင်ရှေ့ဆက် Moving, မာဖီ Licata အနီးရှိ 3rd ဌာနခွဲရဲ့ချေမှုန်းရေးဆင်းသက်ပါဝင်ခဲ့နှင့်တစ်ဦးအချင်းချင်းကွဲပြားခြင်းပြေးသမားအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ တပ်ကြပ်ရာထူးတိုးမြှင့်ငါးရက်အကြာမှာသူ Canicatti အနီးမြင်းစီးမှလွတ်မြောက်ရန်ကြိုးပမ်းနှစ်ခုအီတလီအရာရှိတွေသတ်ပစ်ရန်ကင်းကင်းလှည့်အပေါ်သူ၏ပစ်ခတ်မှုကျွမ်းကျင်သူဆုတံဆိပ်ကျွမ်းကျင်မှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်ကျော်, မာဖီ Palermo အပေါ် 3rd ဌာနခွဲရဲ့ကြိုတင်မဲအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူဒါပေမယ့်လည်းငှက်ဖျားကန်ထရိုက်။
စစ္စလီကျွန်းပေါ်ကင်ပိန်း၏နိဂုံးနှင့်အတူမာဖီနှင့်ဌာနခွဲအဆိုပါသင်တန်းသို့ပြောင်းလဲ အီတလီ၏ကျူးကျော် ။ စက်တင်ဘာလ 18 ရက်နေ့က Salerno မှာကမ်းခြေလာမယ့်ကိုးရက်ပတ်လုံးကနဦးမဟာမိတ်ဆင်းသက်ပြီးနောက်, 3rd တိုင်းချက်ချင်းအရေးယူသို့ ဝင်. Cassino ရောက်ရှိရှေ့တော်၌ထို Volturno မြစ်နှင့်ဖြတ်ပြီးတစ်ခုကြိုတင်ပြီးစတင်ခဲ့သည်။ တိုက်ပွဲတွေ၏သင်တန်းမှာတော့ Murphy ကချုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကွောငျးတညဉ့်ကင်းလှည့်ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ အေးဆေးတည်ငြိမ်ကျန်ရှိသူသည်ဂျာမန်တိုက်ခိုက်ပြန်လှည့်ရှိသူ၏ယောက်ျားညွှန်ကြားနှင့်အတော်ကြာအကျဉ်းသားဖမ်းမိ။
ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်ဒီဇင်ဘာလ 13 ရက်နေ့တွင်တပ်ကြပ်ကြီးတစ်ဦးမြှင့်တင်ရေးအတွက်ရလဒ်။
Cassino အနီးရှေ့တန်းကနေဆွဲထုတ်ခြင်း, 3rd တိုင်းထဲမှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူ Anzio မှာဆင်းသက် မှုကြောင့်ငှက်ဖျားရောဂါထပ်မဖြစ်အောင်မှဇန်နဝါရီ 22, 1944. တွင်, ယခုန်ထမ်းတပ်ကြပ်ကြီး Murphy က, ကနဦးဆင်းသက်လွဲချော်ပေမယ့်တစ်ပါတ်နောက်ပိုင်းတွင်ဌာနခွဲပြန်လည်။ Anzio န်းကျင်တိုက်ပွဲတွေ၏သင်တန်းကာလအတွင်းယခုန်ထမ်းတပ်ကြပ်ကြီး Murphy, အရေးယူအတွက်သူရဲကောင်းဝါဒနှစ်ခုကြေးကြယ်ရရှိခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးမတ်လ2ရက်နေ့တွင်မိမိအလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်နှင့်ဇွန်လများတွင်ရောမမြို့၏ကျဆုံးခြင်းနှင့်အတူမေလ 8, မာဖီနှင့် 3rd တိုင်းအပေါ်ဂျာမန်တင့်ကားကိုဖျက်ဆီးဘို့ဒုတိယဆုတ်ခွာနှင့်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်တောင်ပိုင်းပြင်သစ်တွင်ဆင်းသက်ရန်ပြင်ဆင်နေစတင်ခဲ့ကြသည် စစ်ဆင်ရေး Dragoon ။ စတင်အဆိုပါဌာနခွဲမှသြဂုတ်လ 15 ရက်နေ့တွင်စိန့် Tropez အနီးဆင်းသက်ခဲ့သည်။
ပြင်သစ်တွင် Murphy ရဲ့သူရဲကောင်းဝါဒ:
သူကကမ်းခြေလာနေ့ရက်တွင်, မာဖီရဲ့မိတ်ဆွေကောင်း Lattie Tipton လက်နက်ချ feigning ခဲ့တဲ့ဂျာမန်စစ်သားတစ်ယောက်အားဖြင့်သေဆုံးခဲ့ရသည်။
နံ့သာပေါင်းကို, မာဖီအများအပြားကပ်လျက်ဂျာမန်ရာထူးရှင်းလင်းဖို့ဂျာမန်လက်နက်သုံးပြီးရှေ့တော်၌ထိုရန်သူစက်သေနတ်အသိုက်အထဲကသုတ်ရှေ့ဆက်နဲ့ Single-handedly ဝင်စီးပြီး။ မိမိအသူရဲကောင်းဝါဒအဘို့သူသည်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Service ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ 3rd တိုင်းပြင်သစ်သို့မြောက်ဘက်မောင်းအဖြစ်, Murphy ကတိုက်ခိုက်ရေး၌သူ၏ထူးချွန်စွမ်းဆောင်ရည်ဆက်ပြောသည်။ အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့တွင်သူ Cleurie ကျောက်မိုင်းမြို့အနီးတစ်စက်သေနတ်အနေအထားရှင်းလင်းရေးများအတွက်ငွေစတားအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ဤသည်က Le Tholy အနီးအမြောက်တပ်ကိုညွှန်ကြားဖို့တိုးတက်ဘို့ဒုတိယဆုကနောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။
မာဖီရဲ့ကြယ်စွမ်းဆောင်ရည်၏အသိအမှတ်ပြုမှုအတွက်သူ Now ကိုမိမိအတပ်စုတစ်စုကိုဦးဆောင်အောက်တိုဘာလ 14 ရက်နေ့မှာဒုတိယလက်ထောက်တစ်ဦးစစ်မြေပြင်ကော်မရှင်လက်ခံရရှိ, Murphy ကနောက်ပိုင်းမှာအဲဒီလအတွက်တင်ပါးမှာဒဏ်ရာရခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်တစ်ဆယ်ရက်သတ္တပတ်ကုန်ခဲ့သည်။ နေဆဲ bandaged သည်သူ၏ယူနစ်မှပြန်လာသောသူဇန်နဝါရီလ 25, 1945 ရက်တွင်တပ်ခွဲမှူးကို လုပ်. , ချက်ချင်းတစ်ခုပေါက်ကွဲမော်တာပတ်ပတ်လည်ကနေတချို့ဗုံးစကိုယူခဲ့ပါတယ်။ command ကိုအတွက်ကျန်ရှိနေသော, သူ့ကုမ္ပဏီ Holtzwihr, ပြင်သစ်အနီးရှိ Riedwihr ဝုဒ်၏တောင်ဘက်အစွန်းတစ်လျှောက်တွင်နောက်နေ့အရေးယူသို့သွားလေ၏။ မိုးသည်းထန်စွာရန်သူဖိအားပေးမှုအောက်မှာနှင့်ကျန်ရှိသောသာကိုးယောက်ျားနှင့်အတူ, Murphy ကပြန်လဲကျဖို့အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူအမိန့်ပေးခဲ့သည်။
သူတို့နုတ်ထွက်အဖြစ်, Murphy ကဖုံးအုပ်မီးပေးရာဌာန၌ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ မိမိအခဲယမ်းသုံးနသူတစ်ဦးကိုမီးရှို့ M10 အကြံပေးအဖွဲ့ဖျက်သင်္ဘောပေါ်ကနေတက်နှင့်၎င်း၏လျှင် 50 ကယ်လိုရီကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့ပြင်ရန်သူအနေအထားအပေါ်အမြောက်တပ်မီးအတွက်တောင်းဆိုနေစဉ်အတွင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဂျာမန်ကျင်းပရန်စက်သေနတ်။ မိမိလူတို့နောက်တဖန်ရှေ့ဆက်ရွေ့လျားစတင်သည်အထိခြေထောက်တွင်ဒဏ်ရာရခံနေသော်လည်း Murphy နီးပါးတစ်နာရီအဘို့ဤရန်ပွဲဆက်ပြောသည်။
တစ်ဦးတန်ပြန်စည်းရုံးရေး, လေထောက်ခံမှုအားဖြင့်ကူညီခဲ့ Murphy, Holtzwihr ကနေဂျာမန်မောင်း။ သူ့ရဲ့ရပ်တည်ချက်၏အသိအမှတ်ပြုမှုအတွက်သူ Holtzwihr မှာစက်သေနတ်တပ်ဆင်ထားခဲ့သောအဘယ်ကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာမေးတဲ့အခါ, Murphy က "သူတို့ကသူငယ်ချင်းတွေသတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည်။ " replied ဇွန်လ 2, 1945 ရက်တွင်ဂုဏ်ပြု၏တံဆိပ်ရရှိခဲ့
လယ်ပြင်ကနေဖယ်ရှား, မာဖီဟာဆက်ဆံရေးရုံးအရာရှိတစ်ဦးကိုဖန်ဆင်းနဲ့ဖေဖော်ဝါရီ 18 မှဇန်နဝါရီ 22 ကြားကသည်သူ၏ယေဘုယျစွမ်းဆောင်ရည်၏အသိအမှတ်ပြုမှုခုနှစ်တွင်ဖေဖော်ဝါရီလ 22 ရက်နေ့မှာပထမဦးဆုံးလက်ထောက်ရာထူးတိုးမြှင့်ခံခဲ့ရပါတယ်, Murphy က Merit ၏ Legion ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ၏နိဂုံးနှင့်အတူ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အဆိုပါပဋိပက္ခ၏အများဆုံးအလှဆင်အမေရိကန်စစ်သားအဖြစ်ချီးကျူးဥရောပမှာသူအိမ်ပြန်ပို့ပေးခဲ့များနှင့်ဇွန်လ 14 ရက်နေ့တွင် San Antonio တွင်, တက္ကဆပ်ရောက်ရှိလာခဲ့, မာဖီဟာအမျိုးသားရေးသူရဲကောင်းနှင့်စစ်ရေးပြ, ပွဲများ၏ဘာသာရပ်ကြီး နှင့်ဘဝမဂ္ဂဇင်း၏မျက်နှာဖုံးပေါ်မှာထင်ရှား၏။ တရားဝင်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များ Murphy ကအနောက်ပွိုင့်ဖို့ရက်ချိန်းရယူနှင့် ပတ်သက်. ခဲ့သော်လည်း, ကပြဿနာနောက်ပိုင်းတွင်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ တရားဝင်ဥရောပကနေသူ့ပြန်လာအောက်ပါဝိန်း Fort ဆမ်ဟူစတန်ဖို့တာဝန်သူဖဲကြိုးဖြတ်တူညီတဲ့လမင်းသားဒါကစက်တင်ဘာလ 21, 1945 ရက်တွင်အမေရိကန်ကြည်းတပ်အနေဖြင့်ဆေးရုံကဆင်းခဲ့ပါတယ် ဂျိမ်း Cagney အနေနဲ့သရုပ်ဆောင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလိုက်ရန်ဟောလိဝုဒ်မှ Murphy ကဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါမိဘမဲ့ဂေဟာကနေသူ့အငယ်မောင်နှမဖယ်ရှားခြင်း, မာဖီသည်သူ၏ကမ်းလှမ်းမှုကိုအပေါ် Cagney တက်ယူခဲ့ပါတယ်။ သူကတစ်ဦးသရုပ်ဆောင်ကဲ့သို့မိမိကိုမိမိတည်ထောင်ရန်အလုပ်လုပ်ခဲ့အဖြစ်, Murphy ကယခုတိုက်ခိုက်ရေး၌မိမိအချိန်ထဲကနေဖုံးလွှမ်းနေတာကို Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါအဖြစ်ရောဂါမည်ဖြစ်ကြောင်းကိစ္စများအားဖြင့်နှောငျ့ခဲ့သည်။ ခေါင်းကိုက်ခြင်း, အိပ်မက်ဆိုးများနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုဦးတည်အချိန်များတွင်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာအပြုအမူပြသအဖြစ်အန်ကနေဆငျးရဲဒုက်ခသူဆေးပြားအိပ်ပျော်နေသောအပေါ်တစ်ဦးမှီခိုတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
ဒီအသိအမှတျပွု Murphy ကအပြင်ကိုချိုးဖျက်ဖို့တစ်ပါတ်အဘို့ဟိုတယ်ခန်းထဲမှာသူ့ကိုယ်သူသော့ခတ်။ စစ်ပြန်များ၏လိုအပ်ချက်များအတွက်တစ်ဦးထောက်ခံသူသူနောက်ပိုင်းမှာမိမိအရုန်းကန်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီးပေါ်ပေါ်ထင်ထင်စကားပြောနှင့်မှပြန်လာသောသူတွေကိုစစ်သားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်နှစ်ဦးစလုံးမှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ရန်အလုပ်လုပ်ခဲ့ ကိုရီးယား နှင့် ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲများ ။
သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကိုပထမဦးဆုံးမှာရှားပါးခဲ့သော်လည်း, သူသည် 1951 ခုနှစ်၏ The ၌သူ၏အခန်းကဏ္ဍများအတွက်အရေးပါကောင်းချီးရရှိခဲ့သည် ရဲစှမျးသတ်တိ၏အနီရောင်တံဆိပ်ကို လေးနှစ်အကြာတွင်မရဏာနိုင်ငံနှင့်အသို့ပြန်သွားရန်ရန်မိမိအကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိများ၏လိုက်လျောညီထွေအတွက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်း Murphy ကလည်းတက္ကဆက်ပြည်နယ်အမျိုးသားအစောင့်တပ်ဖွဲ့ဟာ 36 ခြေလျင်တပ်မအတွက်ကပ္ပတိန်အဖြစ်သူ၏စစ်ရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြန်လည်စတင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ မိမိအရုပ်ရှင်စတူဒီယိုတာဝန်များနှင့်အတူဤအခန်းကဏ္ဍ Juggling သူစုဆောင်းရေးအားထုတ်မှုအတွက်ကူညီခဲ့အသစ်ကစောင့်အဖြစ်ကိုသွန်သင်ဖို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ 1956 ခုနှစ်မှာအဓိကဖို့ရာထူးတိုး, Murphy ကတစ်နှစ်အကြာတွင်မလှုပ်ရှား status ကိုမေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်။ လာမယ့်နှစ်ဆယ်ငါးနှစ်ရှိသော်ကျော်, Murphy ကအများဆုံးသူတို့ကိုဥရောပဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူလေးဆယ်လေးရုပ်ရှင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ထို့အပြင်သူသည်အကြိမ်ကြိမ်ရုပ်မြင်သံကြားပွဲပေါင်းနောက်ပိုင်းတွင် Fame ၏ဟောလိဝုဒ်လမ်းလျှောက်အပေါ်တစ်ဦးကြယ်ပွင့်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင်အောင်မြင်သောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတေးရေးဆရာကသူ့လေယာဉ်ကိုမေလ 28 ရက်နေ့တွင် Catawba အဘိဓါန်, VA သို့အနီး Brush တောင်သို့ပျက်ကျခဲ့အခါ, Murphy ကဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကသေဆုံးခဲ့ရသည်, 1971 သူကဂုဏ်ပြုလက်ခံသူများ၏ Arlington အမျိုးသားသုသာန်ဇွန်လ7ရက်နေ့တွင်သော်လည်းတံဆိပ်မြို့၌သင်္ဂြိုဟ်လေ၏သူတို့ရဲ့ headstones အလှဆင်ရှိသည်ဖို့ခွင့်ရှိသည် ရွှေအရွက်နှင့်အတူ, Murphy ကယခင်ကမိမိအသည်အခြားဘုံစစ်သားများကဲ့သို့လွင်ပြင်ကျန်ကြွင်းသောမေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်။ သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်စစ်ပြန်ကူညီပေးဖို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၏အသိအမှတ်ပြုမှုခုနှစ်တွင် San Antonio တွင်, TX အတွက် Audi အယ်လ် Murphy ကသတိရအောက်မေ့ VA သို့ဆေးရုံ 1971 ၌မိမိဂုဏ်အသရေအတွက်အမည်ရှိ၏။
Audi Murphy ရဲ့ Decoration
ပုံမှန် Service ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်
ပထမဦးစွာ Oak ရွက် Cluster နှင့်အတူ Silver Star
"V ကို" စက်ပစ္စည်းများနှင့်ပထမဦးစွာ Oak ရွက် Cluster နှင့်အတူကြေးဝါစတားတံဆိပ်
ဒုတိယအ Oak ရွက် Cluster နှင့်အတူခရမ်းရောင်နှလုံးသား
Merit ကို Legion of Honour
ပထမဦးစွာ Oak ရွက် Cluster နှင့်အတူပုံမှန်ယူနစ်အထိမ်းအမှတ်တွေကို
တဦးတည်း, ငွေဝန်ဆောင်မှုကြယ်ပွင့်နှင့်အတူဥရောပ-အာဖရိက-အရှေ့အလယ်ပိုင်းကင်ပိန်းတံဆိပ်သုံးခုကြေးဝါဝန်ဆောင်မှုကြယ်နဲ့တဦးတည်းသောကြေးဝါဝန်ဆောင်မှု arrowhead
အဆိုပါ Croix က de Guerre ၏အရောင်များအတွက်ပြင်သစ် Fourragere
ဂုဏ်ပြု, Chevalier ၏အဆင့်ပြင်သစ်ကို Legion of Honour
ငွေအကြယ်ပွင့်တွေနဲ့ပြင်သစ် Croix က de Guerre
အုန်းနှင့်အတူဘယ်လ်ဂျီယံ Croix က de Guerre 1940
တက္ကဆက်ပြည်နယ်သမိုင်းဆိုင်ရာအစည်းအရုံး: Audi Murphy
Audi အယ်လ် Murphy ကသတိရအောက်မေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်
Arlington သုသာန်: Audi အယ်လ်မာဖီ
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: အထွေထွေတဲ့ Carl အေ Spaatz
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: Group မှဗိုလ်ကြီးဆာဒေါက်ဂလပ် Bader
ပထမကမ္ဘာစစ်: Oswald Boelcke
အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကြီး: ဗိုလ်မှူးချုပ်ယောဟနျသ Hunt ကမော်ဂန်
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: ရေယာဉ်စုရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Chester ဒဗလျူ Nimitz
1812 ၏စစ်ပွဲ: ဗိုလ်ကြီးသောမတ်စ် MacDonough
စစ်တပ်လေကြောင်း: ဗိုလ်မှူးချုပ် Billy Mitchell က
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: ရေယာဉ်စုရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝီလျံ "Bull" Halsey
ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး / နပိုလီယံစစ်ပွဲတွေ၏စစ်ပွဲများ: ဒုရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Horatio နယ်လ်ဆင်
Göbekli Tepe - တူရကီအတွက်အစောပိုင်းသတ်ဖို့ရေးစင်တာ
ဂြာမနျတွင် 'ငါကိုသင် Love' '
တရုတျထဲတွင် 10000 အထက် Count မှလေ့လာပါ
3 ကိန်းဂဏန်းအပိုဆောင်းသင်ထောက်ကူ (အဘယ်သူမျှမ Regrouping)
သစ်သီးယင်ကောင်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ Get လုပ်နည်း
ဘယ်လို Ouija ဘုတ်အဖွဲ့အလုပ်လုပ်သလား?
မာရျနတျ Prada ကျီ
အဆိုပါ Cue Ball ကိုဆွဲပါရန်အမှားအမှန်နည်းလမ်းများ
Aurelia Cotta, Julius ကဲသာဘုရင်၏မိခင်
တောင်ပေါ်က Tambora 19 ရာစု၏အကြီးဆုံးမြို့မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုခဲ့
အဆိုပါ Subjunctive Mood မှနိဒါန်း
တစ်ဦး Succesful စာအုပ်အစီရင်ခံစာရေးပါလုပ်နည်း